Boya ndiyo inotungamira inogadzira yevhisi sealer bhegi uye mabhanzi ane nhoroondo yemakore makumi maviri, mutengo wakaderera, mhando yepamusoro, giredhi rekudya, unogona kuwana zvese izvi kuBoya!
Vacuum sealer bhegi inonziwo embossed yekuzorora bhegi ndechimwe chedu chinoratidzwa chigadzirwa, nerutivi rumwe rwakagadzirwa rumwe rutivi rwakajeka, Yakasarudzika yakavezwa pamusoro, nyore inoburitsa mweya kunze kwehombodo kuti uchengete chikafu chako chitsva uye uwedzere hupenyu hwesherufu, uine mameseji akachena. mabhegi unogona kunakirwa nechikafu chitsva kunyangwe kumba.
Yedu yekuvhara sealer mabhegi anoshanda neese makuru makuru brand vacuum sealer: Chikafu Saver, Weston, Cabela's, Seal-a-Kudya, Ziploc & nezvimwe ...
Seimwe yeinotungamira gadzira yemapurasitiki anochinjika muChina, Boya anopa ese akasiyana mabhegi uye mafirimu ane yakafara yakafara mafomu .Kwete chete kwekutakura chikafu, chaizvo muti-rukoko co-exrruded firimu ine zvakawanda zvakasiyana chimiro, nekuchinja kweimwe raiti ukobvu chichava chakasiyana chigadzirwa kunechimwe chikumbiro .Semuenzaniso, Kunhuhwira chiratidzo chubhu bhegi uye firimu ndeimwe yedu inopisa yekutengesa chigadzirwa, inogadzirwa neaka-extruded tekinoroji ine yakakwira chipingamupinyi uye rakasiyana ruvara.
Anti-hwema hwepamusoro chinodzivirira chubhu Mabhegi akakwana kune yakasviba inonhuwirira chinhu uye zvakare anobatsira kwazvo kuchengetedza mishonga, fodya, yakaoma miriwo. Boya's anti-hwema chubhu mabhegi akasimba uye anopokana. Isu takagamuchira mukurumbira wakanaka mumusika weJapan.
Boya inogadzirwa yakavambwa muna 2018, yakazvipira pachedu patsva yekutsvagisa zvinhu, ganda firimu ndechimwe chechigadzirwa chedu chitsva chine mhinduro yakanaka pamusika .Tinogona kupa dzakasiyana siyana ganda mafirimu nekukwirisa uye kubwinya. , Kunyange chigadzirwa chakaomarara uye chakakombama chinogona kupakurwa uye kutakurwa zvakachengeteka.
Boya -ye inotungamira gadzira yezvishandiso zvekutakura zvinhu muChina zvinopa huwandu hwechigadzirwa nehupamhi hwekushandisa .Yedu yepamusoro performance Lidding mafirimu ese ari maviri lamination uye akabatanidzwa-pamwe neakakwana ekuisa chisimbiso zvivakwa zvinogona kuenzaniswa neakasiyana substrate inosanganisira PE, PP, PS, PET, PVC, uye Aluminium.
Iwe unogona kuve neyakaganhurirwa yakakwirira, yepakati chipingamupinyi kana isina chipingamupinyi. Mafirimu edu ekuraira anowanikwa ne 'nyore peel', yepamusoro yekuisa chisimbiso materu uye anti-fog zvivakwa.
Ye 9-rukoko PA / EVOH / PE uye PE / EVOH / PE chimiro icho chinowedzera chemberi chipingaidzo mune yekuvhara mafirimu ayo anochengetedza chigadzirwa chitsva uye anowedzera pasherefu hupenyu.
Boya imwe nyanzvi inogadzira muChina, gadzira mabhegi emhando yepamusoro uye mafirimu ekupakata chikafu izvo zvinokwanisa kubata chikafu nekukwikwidza mutengo.Tiri zvakare kambani ine hunyanzvi yakazvipira kutsvagisa zvinhu zvitsva zvekuputira.
Seimwe yeanoshanda zvakanyanya uye nzira yekutengesa yekuchengetedza chikafu .Otu ekuvhara mabhegi akagadzirwa nePA / PE uye PA / EVOH / PE co-extrusion firimu, gadzirisa rakasiyana bhegi mhando iwe iwe senge 3 divi rakanamwa, 2 divi chisimbiso kana chubhu bhegi. Iwe unogona zvakare kuwedzera zipi uye kudhinda anosvika gumi mavara.
Kunyangwe iwe uchitsvaga 2.5mil, 3mil, 4mil, 5mil standard chipingamupinyi kana yakakwira chipingamupinyi yekuvhara bhegi - tinogara tine izvo zvaunoda!
PVDC Yakakwira-Chipingamupinyi Mabhegi, mhuri nyowani yemabhegi e multilayer, inopa yakanyanya okisijeni uye hunyoro chipingamupinyi. Izvo zvinotora kugona kwekuisa chisimbiso kwemabhagi epamusoro ekudzivirira kusvika padanho nyowani.
Seimwe yeanotungamira mugadziri multilayer PVDC chipingamupinyi shrink bhegi muChina, Boya arikushandisa tekinoroji yepasirose yepasi kuburitsa multilayer coextruded PVDC shrink mabhegi. Isu takagadzira yakasarudzika fomula iyo inopa kuomarara chisimbiso, kukwirira kuramba, yakanakisa okisijeni uye mvura chipingamupinyi, uye kunoshamisa kubwinya uye kujeka.
Boya shrink mabhegi anosangana nezvazvino zvinodiwa zveDFA mune zvekutakura zvekudya. Iyo yakakodzera kurongedza zvese zvitsva uye zvakaomeswa nechando nyama / hove zvigadzirwa zvine kana pasina mapfupa, chizi, nezvimwewo PB inogona kushandiswa kurongedza zvese zvitsva zvigadzirwa zvechikafu zvekuzotevera kuchengetedza pa0 ～ 4, ℃ uye nechando chikafu chikafu chekuchengetedza pa -18 ～ -40 ℃.
Mhepo mbichana bhegi iyo inonziwo inflatable mweya mabhegi anoshandiswa zvakanyanya pakutakura kwechimwe chigadzirwa chisina kusimba. Iyo inogona kukupa iwe dziviriro yakakwana kuzvinhu zvako kuti uve nechokwadi chekuti vatengi vako vanowana izvo zvavanotenga.
Boya's air column mabhegi ane hunyanzvi hwekuyambuka-chinongedzo chinogona kumira yakakwira tembiricha kupfuura yakajairwa mweya yekoramu mabhegi .Iyo yakanyatsogadzirirwa kusangana nezvose zvakapakurwa zvinodiwa mumusika wakasiyana .NeBoya mweya yekoramu mabhegi iwe unogona kuwedzera bhizinesi rako rinoda kushaya kuzadza uye kudzivirira zvigadzirwa zvako nekukurumidza uye zviri nyore.
Yayo inochinjika kugona kugona kubvarura mukaha pakati petsika isina maturo yekuzadza uye yekumisikidza kunyorera. Iwe unogona kugadzira bhagi rekoramu kuti uzadze chero maburi uye wobva wawedzera inotyisa-inotapura dura rekuputira chebhuru kumabhokisi ese. Kurongedza kwemhepo yemhepo kunopa dziviriro yepamusoro kana ichienzaniswa neyechinyakare zvinhu zvekutakura uye zvakare zvinogona kuchengetwa zviri nyore kutora chikamu chidiki chenzvimbo semanzungu nefuro.
Seimwe yeinotungamira gadzira inoshanduka pasuru muChina, Boya haangokupa iwe yekupakata zvinhu chete uye yemuchina yekupakata muchina .Tinogona kukupa akasiyana mapaketi muchina akakodzera kumarudzi ese ekuputira zvinhu, senge thermoforming vharuvhu yekupakata muchina, vharuvhu yekupakata muchina , Vacuum (inflatable) yekupakata muchina, yeganda yekuvhara muchina muchina, isina mvura yekupakata muchina, kudziya shrink muchina, Bhokisi mhando mhepo conditioner kurongedza.
Bhoya raGANDA VACUUM KUSVIRA MACHINE rine zvakanakira nzvimbo yakakura yekushandisa. Anofananidzwa mafirimu ari Pe firimu kana PE / EVOH / Pe firimu .Iyo nyowani mhando yekupakata nzira ine mukana wepamusoro kutaridzika kwechigadzirwa iwe chaunorongedza .Inokodzera chimwe chikafu chikafu chikafu kana kana iwe usingade chipingamupinyi unogona kushandisa PE firimu. kune anti-guruva .Iyo inogona zvakare kuchengetedza chigadzirwa chako panguva yekutakura.
Seimwe yeinotungamira gadzira inoshanduka pasuru muChina, Boya haangokupa iwe yekupakata zvinhu chete uye yemuchina yekupakata muchina .Tinogona kukupa iwe dzakasiyana-siyana yekutsvaira kamuri yekupakata muchina, senge inovhuvhuta (inflatable) yekupakata muchina, ina mutsetse wevha yekuvhara muchina, Otomatiki swing chifukidzo chevha yekumachisa muchina, kaviri chisimbiso ichiumburuka mweya wekuputira muchina, kutenderera muchina wekuputira muchina, vharuvhu kamuri kurongedza muchina.
Iyi diki yekuchengetera kamuri yekupakata muchina ine imwechete chete yekushanda kamuri, yakakodzera kune diki fekitori, yekutsvagisa Institute, murabhoritari… ..Nekunaka kwekudzikira kwesimba kwesimba kushandiswa uye nyore kushandisa. Muchina uyu unogona kushandiswa kwakasiyana-siyana emabhegi semuenzaniso mabhegi evhavha, mabhegi evhavha, zipi mabhegi, simuka homwe uye zvichingodaro.